Etu esi agbakwunye ma wepụ Wepụ 3D - LucidPix
Etu esi etinye ma wepu 3D Frame
Etu esi agbakwunye ma wepụ Wepu 3D na LucidPix
Anyị enwetala ajụjụ ụfọdụ n’oge na-adịbeghị anya gbasara ịmepụta foto gị 3D na enweghị 3D Frame, yabụ, na nzaghachi anyị na-enyere gị aka ịgagharị ngwa a ka mma site na post blọọgụ a!
Mepee ngwa LucidPix ma họrọ akara igwefoto. N'ebe a, a ga-eduzi gị ozugbo na peeji nke "3D Frame". Nke a gosipụtara gị ihe mgbochi 3D ozugbo dị ka usoro atụ. N'akụkụ ihuenyo ahụ, pịa nke ọma bọtịnụ njide, enwere nhọrọ atọ ị nwere ike ịhọrọ iji mepụta ihe osise 3D gị: Frame 3D, ihu ihu na 3D foto. You nwere ike ịgagharị na atụmatụ atọ ndị a wee họrọ atụmatụ ịchọrọ iji mepụta foto 3D gị.
Nhazi 3D Frame
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye 3D Frame na foto gị, họrọ 3D Frame, wee pịgharịa na ọtụtụ nhọrọ 3D etiti n'okpuru foto ahụ. LucidPix na-enye ọtụtụ okirikiri dị iche iche nke 3D Frames, dị ka, Nature, Fun, Life, Food, Travel, wdg. Ebe a, anyị họọrọ bọọlụ Nkata dị na ngalaba Ọhụrụ iji mepụta mma dị mma nke basketball na-abanye hoop na-esote foto ahụ. nke ulo.
Wepụ 3D Frame
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka enwee foto gị 3D n'enweghị 3D Mee, yabụ, enwere ike ịme nke a ngwa ngwa! Site n'ụlọ peeji, pịgharịa gaa na nhọrọ "3D Photo". Foto nkeonwe gị ga-apụta ebe ị nwere ike ịhọrọ foto ọ bụla ka agbanwere gaa 3D ma nke a ga - eme ya na enweghị 3D Mee. N’aka nke ozo, hota akara ngosi igwefoto were were foto 3D n’onwe gi n’etiti LucidPix.
Inwe ajụjụ ọ bụla? Nwere onwe gị ịgụnye anyị ozi na Facebook ma ọ bụ Instagram na ajụjụ ngwa gị, anyị ga-anwa ike anyị ịza ha!
Lukwado LucidPix na ahia gi nke na ere →← Uru 3D nke Photoslọ Ọrụ Gị